Ny takelaka iPhone vaksiny dia mitentina $ 35, fa tokony hividy Instant Pot Vacuum - BGR - TELES RELAY
HOME » efaha amin'ny isam- Ny takelaka iPhone vaksiny dia mitentina $ 35, fa tokony hividy Instant Pot Vacuum - BGR
Ny takelaka iPhone vaksiny dia mitentina $ 35, fa tokony hividy Instant Pot Vacuum - BGR
Le ChefSteps Sous Vide Joule dia antsoina matetika hoe "vaksin-tsakafo iPhone" ary "ny plastika avoakan'i Apple raha hanao kitapo fofona i Apple." Raha ny marina, ny labozia dia tsy misy afa-tsy labels ihany iPod tamin'ny fotoana nanaovan'i Apple iPod niakanjo sy fotsy. Amidy amin'izao fotoana izao amin'ny vidin'ny $ 144, izay tsara indrindra ho an'ny modely amin'ny 1100 watts. Raha ny marina, raha mila milina fandefasana vaovao ianao dia tsy maintsy mividy ny fandefasana plastika Instant Pot SSV800 Vacuum Slim Vacuum ho ambany noho ny $ 80.
fitaovana tsy misy vidiny misy haavo, vatany ary fotsy fotsy, 11 santimetatra ary 1,1 lbs
SAVE SPACE: Roapolo avo roa heny noho ny fitaovam-pandehanana hafa, kely dia ampy ny mipetraka ao anaty boatin-jiro.
MAHATSARA NY FIAINANA: 1100 watts amin'ny herinaratra ho an'ny fantsonan'ny rano haingana. Fepetra fampiasana: Frequency 50 ho an'ny 60 Hz, singa tokana
ZAVATRA MAHATOKY: Ny endriky ny Visual Doeness (TM) amin'ny endriky ny Joule dia mampiseho tsara ny fomba omanina sakafo.
WIFI AND BLUETOOTH READY: Miasa amin'ny iPhone na Android - mifandray amin'ny Bluetooth irery na mahandro avy any amin'ny toerana miaraka amin'ny WiFi.
Fampitandremana amin'ny Voltage: miasa amin'ny 120 V jacks fotsiny. Noho ny teknolojia fanamafisam-peo mazava tsara, dia mety hanimba ny Joule ny transformer sy ny mpanatom-pitaovana. Ny fampiasana ivelan'ny Amerika Avaratra dia tsy misy ny fiantohana. Ny Circulator dia manomana haingam-pandriana tsara indrindra ho an'ny trano fisakafoanana ao an-trano, manova ny trano fofona any amin'ny chefs gourmet
Homogenous Cooking - The Sous Vide Vacuum Immersion Circulator dia mamorona sy mitazona batisan-kovitra fanamiana sy fanaraha-maso mahomby ho an'ny vokatra mahandro vokatra tsara isaky ny fotoana  Sakafo Sakafo mora, sakafo mahavelona Vary 10 minitra amin'ny ora sy ny 72 104 avy amin'ny 195F ka hatramin'ny 40F / 90C mankany XNUMXC
Mora ampiasaina - Sarotra mora vakina, manohina ny fanaraha-maso nomerika digitale, stelle maivana maivana miaraka amin'ny fingotra vita amin'ny fingotra amin'ny tanana
Active Pump System - Slice Vacuum Pack dia mampifandray rano tsy misy fampiasana tondra-drano, mamokatra hafanana miavaka amin'ny rano mangatsiaka tsy misy kilaometatra na kilaometatra.
Anisan'izany ny motera 12V DC - mangina tanteraka ary manamora ny faharetany kokoa raha oharina amin'ny motera AC ampiasaina. Mijanona ny môtô rehefa nesorina tao anaty rano.
Ampifanerasina tsara - amin'ny 6 sy 8 pts poty anaty, ao anaty na avy eo ny vilany, ary azo ampiasaina miaraka na tsy misy vilany avy hatrany.
Araho . BGRDeals ao amin'ny Twitter mba hanaraka ireo tolotra farany sy tsara indrindra hitanay tao amin'ny tranonkala.
Ny votoatin'ny Departemantan'ny BGR dia mahaleo tena amin'ny Editorial sy Advertising, ary mahazo Biraom-pifandraisan'ny BGR amin'ny alalan'ny bokintsika.
Ity fitaovana fakantsary mora vidy ity dia mamadika ny iPhone amin'ny alàlan'ny Digital Digital SLR - BGR
Tsy azoko an-tsaina ny fananana Apple Watch raha tsy ampy ity fitaovana kely ity - BGR